Xilliyada nasiinada ayay isaga & xaaskiisu u casho tegi jireen magaalada, kaddib maxaa dhacay? | Hadalsame Media
Home Madadaalada Xilliyada nasiinada ayay isaga & xaaskiisu u casho tegi jireen magaalada, kaddib...
Xilliyada nasiinada ayay isaga & xaaskiisu u casho tegi jireen magaalada, kaddib maxaa dhacay?
(Hadalsame) 15 Feb 2020 – Xiliyada laga nasto shaqooyinka ayey nin iyo xaaskiisu habeennada qaarkood maqaayadaha u casho tegi jireen.
Habeen habeenada ka mid ah isagoo ninka isu diyaariyey in xaaskiisa uu kaxeeyo ayaa waxaa dhacday in marwadii ay ku tiri gacaliyaheeda waxaan kaa codsanayaa halkii aan anigu ku raaci lahaa in aad casuunto oo aad kaxeyso la soo casheyso waqtina la soo qaadato hooyadaa.
Ninki ayaa jiriricooday wuxuuna ku yiri: “Allaha ku barakeeyo hana ku abaalmariyo marwadeydii sharafta badneyd.”waa runtaa inta ugu badan shaqada, adiga iyo caruurta ayaan ku mashquulay, dabeedna wuxuu durbadiiba wacay Hooyadii. Wuxuuna u sheegay inuu soo marayo wada lugeynayaan, soona wada cunteynayaan.
Markii ay soo noqdeen ayuu weydiiyay hooyadii in ay faraxsan tahay. Waxay tiri haa wiilkeygiyow Alle ayaan ku dhaartee aad baan kuugu faraxsanahay adiga iyo reerkaagaba.
Waxay tiri, “Maya hooyo, casuumada xigta aniga ayay iga imanaysaa In Sha Allaah .” Wuuna ku waafaqay.
“Wiilkeyga aan jeclaa, Allaha ku abaal mariyo, waxaan kugula ballamay inaan isla goobtan kugu casuumo balse mashquul badan baad ahayd, ballanteydi ayaan fuliyay adiga & xaaskaaga ayaana idin wada casuumay, hadaan annaga is arki weynay. Ducadeyda ayaa idinla jirta.
Dulucdu waxa ay tahay qiimaha waalidku gaar ahaan hooyada inuu yahay mid aad u weyn.Ha ka careysiin weligaa. Ha dayicin. ha ka mashquulin.
Ma aha inaan sugno marka hooyadu dhimato ama aan waalid noqono inaan garano qiimaha hooyada. Haddii waalidiintaadu nool yahiin si gaar ah Hooyadaa la xiriir, waqti fiican la qaado, cafis weydiiso. Waad Guuleysanaysaa idanka Alle.
Previous articleImisa ayay khasaaraysaa kooxda Man City kaddib ganaaxa UEFA?! (Macallinka & maqaawiir ka tegi karta)
Next articleRASMI: Cudurka coronavirus oo Afrika soo caga-dhigtay (Kiiskii ugu horreeyey & dalka laga helay)